Shanu Kushambadzira Maitiro MaCMO Anofanirwa Kuita Pane Muna 2020 | Martech Zone
Nei Kubudirira kunotsamira pazano rinogumbura.
Kunyangwe kudzikira kwemabhajeti ekushambadzira, maCMO achiri netariro nezve kugona kwavo kuzadzisa zvinangwa zvavo mu2020 zvinoenderana Gartner wepagore 2019-2020 CMO Spend Ongororo. Asi tariro isina chiito haina maturo uye maCMO mazhinji anogona kunge ari kutadza kuronga nguva dzakaoma dziri pamberi.
MaCMO anonetsekana izvozvi kupfuura zvavaive panguva yekuderera kweupfumi, asi hazvireve kuti vanogona kudzikira kuti vatasve nharaunda yakaoma. Vanofanira kuenda kunogumbura. Kuti ubudirire mune ino nzvimbo yekudzikira bhajeti yakafara nguva yekutonga uye kuwedzera tarisiro, maCMO anofanirwa kushandisa zviwanikwa zvavo zvine hungwaru, kumbundira matekinoroji matsva uye kugadzirisa nekukurumidza kuti achinje.
Heano mashanu ari kubuda mafashoni vatengesi vanofanirwa kuita pazviri kuti vaone kubudirira kwavo mu2020, uye kupfuura.
Emerging Trend 1: Shandisa iyo Dhijitari Asset Management Sisitimu
Kuchema kwekuungana kwe zvemukati mambo yakakunda kwemakore asi tekinoroji ichivandudza, 2020 inogona kupedzisira yaburitsa pachena zviripo zvemukati wevatengesi. Kuziva izvo zvirimo zvinobudirira kana zvinobudirira hachisi chinhu chakareruka kupihwa nzira dzakakamurwa dzekuchengetedza pfuma yedu midhiya midziyo. Kana iriko chizvarwa che Content Management System (CMS) mapuratifomu akauya kumusika, vashambadzi vakatengeswa pachivimbiso chekuti vaigona kuvashandisa kuronga zvemukati, asi pachokwadi, iwo masisitimu akatadza kusvika centralized zvemukati hub. Kuti zvirinani kusangana nezvadzo zvemanagement management, vatengesi vanofanirwa kuisa mari mu dhijitari asset manejimendi system (DAM) iyo inokwanisa kutora zvese zvavo zvekushambadzira zvinhu, kudzikamisa mafashama ekushanda uye kunyatso kuendesa.
DAM masisitimu ari kukurumidza kuve chishandiso chakasarudzika chekugadzirisa uye kugadzirisa zvirimo munzira dzese. Ivo vanogonesa vashambadziri kuti vabudirire zvakanyanya nekuti ivo vanokwanisa kunyatso zadza zviripo zvirimo, pane kumanikidza vashambadziri kuti vagadzire zvemukati nyowani pane zvese zvinogoneka zvinodiwa. DAM masisitimu anogona zvakare kupa ruzivo rwekuti ndeupi rudzi rwezvinyorwa zvinoshanda zvakanyanya papuratifomu, zvichiita kuti mari yemushandirapamwe ibudirire.
Ari Kuitika Muitiro: Kumusoro Yako Yekuita Sarudzo
Vatengesi vari kusundira iyo Personalization hamvuropu, inoshuvira kuendesa chaiyo ruzivo kune yega yega mutengi Asi vatengesi vasati vagona kuita zvipikirwa, vanofanirwa kuve nechokwadi chekuti avo vehunyanzvi vanogona kuendesa zvavari kutsvaga. Zvishandiso nyowani zvinonyatso kuyedza kuita kwako zviri kuratidza kuti kuedza kwakakurumbira kwemunhu kunogona kunge kusiri kuburitsa zvaunoda uye panowana mukana wakakura.
Kuita munhu chinhu chinoenderera mberi uye panogara paine mukana wekuvandudza nekuti matekiniki aunza mhedzisiro gore rakapera anogona kupa kudzikira kunodzikira nhasi. Kuvandudza zvemukati zvakasarudzika zvemukati zvinosangana nevatengi zvinofanirwa kuve zvakavakirwa kumusoro-kusvika-kudhara manas uye kusiyanisa mutengi maitiro mamepu. Izvi zvinoreva kutora kupera kwemanzwisisiro kubva kune ese data rekushambadzira - CMS, nzira dzinobuda, kuyedzwa kweUX, email uye nezvimwe - uye nekuzvishandisa kugara uchigadzira yako yekuita zano kugadzira mamwe mushanduko.
Inotungamira Muitiro 3: Dzorerazve Yako Mutengi-Centric Tsika
Push yakananga mutengi centricity mune ese ari maviri B2C uye B2B makambani akaita kuti vatengesi vatore zvakanyanya kutaridzika uye kwakakosha mabasa mukati memasangano avo - uye hazvishamise. Vashambadziri vane hunyanzvi hwekuwedzera hunhu hwekutarisa uye nekuona. Vatengesi inyanzvi zvakare mukutaurirana nekubatana uye vanogona kuona kuti chii chichava chakanyanya kukanganisa vatengi.
Kwakave nemazuva ekutora kunzwisiswa kwekutanga kweizvo vatengi vanoda, kuigovana neboka revatambi veakaundi nekumisikidza mudombo. Vatengesi ikozvino vapihwa simba rekurudzira yevatengi-centric kambani inoda mepu yevatengi rwendo uye kuratidza mikana ku Wow Vatengi.
Muna 2020, vatengesi vanogona kuve iyo glue inobatanidza iyo IT, kutengesa, mashandiro uye zvikwata zvemari pamwechete kuti zvikure izvo nguva dzechokwadi murwendo rwevatengi. Vachabatsirawo zvimwe zvikwata musangano ravo kuzadzisa zvavanorota nevatengi nenzira inotyisa.
Emerging Trend 4: Shingairira Kuvandudza Iwo Akanaka Matimu
Kuziva uye kuhaya tarenda rakakura inokwikwidza zvakanyanya, uye kungowana yakawanda kudaro. Munharaunda ino, vashandirwi nevashambadziri vanofanirwa kushanda pamwechete, sezvo kushambadzira kunogona kuve kwakakomba mudiwa kune vese matarenda kutora uye chengetedzo.
Vashambadziri nhasi vanogona kushandisa simba redigital insights kuti vakurumidze kuona kuti ndedzipi chiteshi dzinoshanda zvakanyanya, kune vateereri vavo, uye meseji ipi ichakubatsira kumira. Isu tiri zvakare vane basa rekusimudzira nyaya yechiratidzo uye nekutsanangudza kukosha kwakasiyana, uko kunogona kubatsira ipapo kutsvaga nekuhaya maitiro.
Zvemukati kushambadzira kutyaira mushandi kukurudzira kunowedzerawo kutumirwa uko kuri kwemhando yepamusoro uye kune yakanyanya chengetedzo chiyero. Maturusi ekurwira nhasi anosanganisirwa zviri nyore nemamwe masisitimu, anowanikwa pazvigadzirwa zvemunhu uye anogona kuvaka akakosha musimba mushandi.
Nepo masangano mazhinji ave kunatsa awo mushandi wekukosha chirevo (EVP), mavhiri acho anogona kunge asiri kufamba. Kukurudzira vashandi vako varipo kuti vawedzere EVP yako inotengeka uye inoshanda sosi yetarenda.
Inotungamira Muitiro 5: Wedzera Data Kunzwisisa
Sezvo bhajeti rekushambadzira richidzikira, dhata iri kuve inonyanya kukoshesa kune vashambadziri sezvo kujeka kunobatsira kuona kuti makambani ari kugadzirisa zviwanikwa zvavo, kuzadzisa mhedzisiro nekuchengetedza yavo yekukwikwidza. Zvakakosha kuti makambani ave nezvivakwa zvekunzwisisa ruzivo uye kurushandisa zvakanaka uye nenguva, asi kuchine zvinetswa. Imwe ndeyekuti data rinoramba rakanyoroveswa nhasi, rakakiiwa mumadhipatimendi akasiyana nemahurongwa. Rimwe dambudziko nderekuti hapana nyanzvi dzakakwana dzedata mumakambani kuti dzivhure zvadzinoreva zvizere uye nekwaniso.
Kuti uwane zvakazara kubva mu data mu2020, vatengesi vanofanirwa kuunza data-rinoshanda data pamwechete mune yakaunganidzwa business intelligence tool uko kwavanogona kuwana maonero akazara. Makambani anofanirwa zvakare kuongorora kuti nyanzvi dze data mukati mekambani dzinogona kudzidzisa sei vamwe, saka vazhinji vashandi vanopihwa simba rekunzwisisa dhata ravanoshanda navo.
Vatengesi vatangi vekutanga edhijitari, vatove neyakavakirwa yekutenga uye yekufungidzira mamodheru. Kugovera hunyanzvi uhu kunze kwedhipatimendi rekushambadzira kune mukana wekubatsira sangano rese nekufumura kukosha kwebhizinesi idzva.
Kutenda kune ese mafambisirwo edhijitari uye analytics, ekushambadzira masangano anogona nyore pivot kutora mukana. Mune ino hupfumi inoshanduka nekukurumidza, kugona kuchinjika nekukurumidza uye nekukurumidza kuenda shure kwemikana uchave mutsauko pakati pekudhonza kumberi nekudonha kumashure Iko kunononoka kubvisa mabhajeti ekushambadzira chiratidzo chekuti makambani ari kungwarira, uye vashambadzi havadi kubatwa-tsoka-tsoka. Ino haisi nguva yekugadzikana, asi kutsvaga mikana yekuwedzera ROI ingangodaro yaive isipo gore rapfuura.
Tags: 2020cmoCMO shandisamutengi-centric tsikakubuda maitirogartnerwedzera roidata rekushambadziraMarketing nzirakushambadzira tarendaboka rekutengesakushambadzira maitiroPersonalizationmapoka
Jay Atcheson ndiye SVP yeKushambadzira pa R2i. Jay atengesa zvigadzirwa nemasevhisi muUS, Canada, Asia neEurope. Nekutarisa pane hunyowani uye mhedzisiro inotungamirwa kushambadzira, Jay kukura kwakanangidzirwa, mutengi centric mushambadzi.